Hay’adda Qaxootiga UNHCR: “In ka badan 7-Milyan oo ruux ayaa Gargaar u baahan Itoobiya”. | Dayniile.com
Home Warkii Hay’adda Qaxootiga UNHCR: “In ka badan 7-Milyan oo ruux ayaa Gargaar u...
Hay’adda Qaxootiga UNHCR: “In ka badan 7-Milyan oo ruux ayaa Gargaar u baahan Itoobiya”.
Hay’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa ka walaac ka muujisay Xaaladda Qoysas ku dhibaateysan Ismaamullada Tigreega, Amxaarada & Canfarta sida lagu muujiyay war kasoo baxay hay’addaan.
7-Milyan oo ruux ayay Hay’adda UNHCR sheegtay in ay saameeyeen Colaadda ka taagan Dalka Itoobiya oo bilaabatay November 2020 kaddib markii Maamulka Abiy Ahmed uu xal Militari ku raadiyay khilaaf ka dhashay dib u dhaca Doorashada.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kaalmo degdeg ah haddii aysan helin qoysaskaan in xaalad halis ah ay lasoo dersi karto, in ka badan 5-Milyan oo ruux oo kamid ah dadkaan waxa ay degen yihiin Ismaamulka Tigray.
Dad ay ku qiyaastay UNHCR 400 oo kun ayaa la nool xaalado u eg macluul maadaama ay waayeen Raashin iyo Biyo ku filan sabab ka dhalatay colaadda oo meesha ka saartay kalsoonida Dadka ay heysteen.
Dowladda Federaalka Itoobiya iyo hoggaanka sare ee Tigray ayaa dhegaha ka xirtay dalabaad ka yimid Hay’adaha hoostaga Qaramada Midoobay oo ah in ay kahor leexdaan gargaarka ay ugu talagaleen qoysaskaan.
Previous articleRaiisul Wasaare Rooble: “Shacabka Abaartu ku saameysay Jubbaland waxa ay u baahan yihiin Gurmad degdeg ah”.
Next articleMAS’UULIYIINTA GOBOLKA NUGAAL OO KULAN LA YEESHAY DADKA U DHASHAY KOONFUR GALBEED
Faahfaahin ku saabsan shirarka u socda Golaha Midowga Musharixiinta
Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib uga furmay wejiga labaad shirweyne ay leeyihiin xubnaha Golaha Midowga Musharixiinta Mucaaradka, kaas oo haatan ka socda hotelka Jaziira...